Nọgidenụ na a na na na gị 2009 Marketing Strategy | Martech Zone
Ezigbo enyi Lorraine Ball, onye na-agba ọsọ Indianapolis ahịa gị n'ụlọnga akpọ Roundpeg, mụ na ya rụkọrọ ọrụ n'afọ gara aga na ndị ahịa ole na ole. Otu n'ime ihe m mụtara na Lorraine bụ ịtụnanya iru na mgbasa akụkọ ka na-enweta. Ọ bụ ihe ịtụnanya ka ọtụtụ ụlọ ahịa si ewepụta ọhụụ - na ole ole mechara banye na blọọgụ. Nke a nwere ike ibu nnukwu maka njikọ azụ, ikike, na ị nweta okwu ahụ na ụlọ ọrụ gị.
Ikekwe nke kachasị dị ịrịba ama bụ na ị gaghị echere ka nnukwu ihe mee na ụlọ ọrụ gị iji bipụta akwụkwọ akụkọ. Ihe dị mfe dịka ọkwa webinar ma ọ bụ ihe ọmụmụ ọhụụ bụ nnukwu ihe! Emela mbelata mgbasa akụkọ na atụmatụ ịre ahịa 2009 gị. N'ihi Scott Whitlock na Innovation Flexware, ụlọ ọrụ teknụzụ na-arụpụta ihe. Scott tụbara m ihe edeturu na-ajụ maka azụmaahịa ndị m na-atụ aro na mbụ ma echere m na ọ ga-eme nnukwu post blog.
Ihe ndi ahu bu PRWeb na PRPeapu ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ya-onwe gị. Ederede mgbasa akụkọ bụ ntakịrị ụdị nka ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ka ha nwee ụkwụ. Kpọọ Lorraine ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ebe ahụ!
Tags: coca-colamgbanwe ntụgharịe-ere ahịaanụ
Feb 1, 2009 n’elekere 11:59 nke abali
Daalụ maka njikọ na ndetu Doug. Anyị ga-arị elu n'iji ịre ahịa n'ịntanetị n'afọ a. Aka gị nyeere mụ onwe m abụrụla ihe ịtụnanya!
Feb 14, 2009 na 3:40 PM
Daalụ maka njikọ ahụ .. Ọ dị mma, yabụ kedu ka m si chefuo ya? Ga-ehirịrị n'ụgbọ ụkwụ. Ezigbo vidiyo kwa!